बलात्कार आरोप लगाउँदा जेल चलान भएकी महिला कोरोनाको मौकामा कैद किनेर छुटिन् – Health Post Nepal
बलात्कार आरोप लगाउँदा जेल चलान भएकी महिला कोरोनाको मौकामा कैद किनेर छुटिन्
२०७६ चैत २९ गते ९:५३
पोहोर साल ३ मंसिरमा कास्की जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा जबरजस्ती करणी र चोरीको थियो । स्याङ्जा घर भई पोखरा बस्दै आएकी एक युवतीले प्रहरीमा दिएको जाहेरीको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले रुपन्देही घर भएका युवकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
७ महिनापछि गत ४ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीले उक्त मुद्दामा फैसला सुनायो । न्यायाधीश काजीबहादुर राईले अभियोग दाबी नपुगेको भन्दै फैसला सुनाए । झुठो आरोप लगाएको भन्दै अदालतले उनलाई १ महिना कैद सजाय सुनायो । १ महिने सजाय भुक्तान गर्न उनी यही ५ चैतमा जिल्ला कारागार कास्की चलान भइन् ।
उनी कारागार चलान हुँदा नेपालमा १ जनामा मात्र कोरोना देखिएको थियो । तर त्यसले विश्वभर महामारीको रुप लिन थालेपछि नेपालीमा पनि त्रासको वातावरण बन्न थाल्यो । कारागार चलान भएको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रति दिनको ३ सय रुपैयाँ तिरेर कैद सजाय किन्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
क्षमताभन्दा बढी बन्दी कारागारमा रहँदा कोरोना संक्रमण फैलिए भयावह स्थिति आउन सक्ने भनेर गरिएको त्यो निर्णयले ती युवतीलाई चिठ्ठा परेजस्तै भयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार उनले कैद माफी पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दिइन् ।
अदालतले कैद माफी दिन उपयुक्त देखेपछि अन्ततः उनी कैद भुक्तान गर्न पुगेको पाँचौ दिन कारागारबाट बिदा भइन् । उनी लकडाउनको अघिल्लो दिन ७ हजार ५ सय तिरेर छुटेकी हुन् ।
सर्वोच्चले गरेको सो निर्णयका कारण कास्की कारागारबाट १२ बन्दीले मुक्ति पाएका छन् । जेलर गणेश गौतमका अनुसार विभिन्न मुद्धामा जेल जीवन बिताइरहेका १० पुरुष र २ महिलाले कैद किनेका हुन् । कैद किन्नेमा लागूऔषध गाँजा मुद्दाका ५, चोरीका २, जबरजस्ती करणी, डाँका चोरी, बहुविवाह र सरकारी छाप दस्तखात दुरुपयोगका क्रमशः १/१ जना रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘त्यसरी छुट्नुपर्ने १६ जना भएपनि ३ जनालाई अदालतले नछोड्न आदेश दियो । बाँकी १ जना छुट्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ,’ उनले भने । कारागारमा अहिले १ वर्षे कैद भुक्तान गरिरहेका झन्डै ६० जना छन् । तर, पटके कसुरदार भएकाले उनीहरुले कैद किन्न पाएनन् । कारागारमा ८ सय ६९ कसुरदारले कैद भुक्तान गररहेका छन् । त्यसमा ८०१ पुरुष, ६६ महिला र २ बालबालिका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालत
कुवेतले माग्यो ठूलो संख्यामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी
प्रदेश १ ले माग्यो स्वास्थ्य कर्मचारी, कुन पदमा कति ?
तीव्र गतिमा फैलिने नोरो भाइरस भारतमा देखियो , कसरी जोगिने ?
कोराेना खोप नलगाएका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो यस्तो सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो स्वास्थ्यकर्मीको तलब तथा सुविधाको विषयमा यस्तो सूचना
कोभिसिल्ड तथा भेरोसेल खोप दिइँदै, कुन–कुन ठाउँमा पाइन्छ?
२४ घण्टामा थपिए ३७२९ संक्रमित, २५ को मृत्यु
२४ घण्टामा थपिए ३९३८ संक्रमित, ३७ को मृत्यु
थपिए २५६८ कोरोना संक्रमित, १८ को मृत्यु
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४० लाख नाघ्यो
फेरी ७७ जिल्लामा फैलियो कोरोना, कहाँ कति संक्रमित?
एक डोज मात्रै लगाए पुग्ने अमेरिकी खोप नेपाल आउँदै
कोरोना संक्रमणबाट ४१ को मृत्यु, थपिए २८९२ नयाँ संक्रमित